Samee avatar gabar anime ah internetka | Laga soo bilaabo Linux
Abuur avatar gabar anime ah khadka tooska ah
Courage | | Muuqaal / Shakhsiyeyn, Aplicaciones, Ciyaaraha, Noticias, Kuwa kale
Hareeraha halkan waxay dhahaan waxaan ahay misogynist iyo macho, wali ma garanayo sababta laakiin haye, halkan waxaan ku keenayaa qoraal ay ka jeclaan doonaan in ka badan iyaga.
Kani waa Anime Avatar Abuuraha, abuure avatar fudud oo internet ah oo lagu bixiyo qaab ciyaarta.
Way fududahay in la maareeyo waxayna noo ogolaaneysaa inaan bedelno astaamo badan oo wajiga ah, waxay noo ogolaaneysaa inaan dhigno qurxinta sida hilqadaha ama hilibka doofaarka.
Waa suurtagal in la doorto midabka timaha, dahabka iyo indhaha, in kastoo aysan ahayn sunnayaasha ama maqaarka, maadaama kan dambe uu leeyahay qaab u gaar ah.
Halkan waxaan ku arki karnaa tusaale ku saleysan wax ka yar ama ka yar nooca dumarka aan jeclahay:
Oo halkan waxaan ku haynaa tusaale kale, oo ku saleysan nooca haweeneyda gebi ahaanba ka soo horjeedda waxa aan jeclahay:
Si aan hal dhinac u dhigo, waxaan dhihi lahaa in badan oo ka mid ah timaha ayaa aad u muuqda, inaan shaqsiyan doorbido timo caadi ah, waxaa sidoo kale jira kuwa aad u wanaagsan.
Dabcan waxaa jira rag aad u jeclaan doona qoraalkan maaddaama aysan ka biyo diidsanayn isticmaalka astaamaha dumarka, tusaale aniga ayaa noqon kara, ama waxay noqon kartaa laba qof oo ka soo muuqanaya boggan iyo in aanan magacaabi doonin haha.
Abuuraha Anime Avatar
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Abuur avatar gabar anime ah khadka tooska ah
Haa haa, horeyba waan u adeegsaday, baatarkeyga 'avatar' halkaas ayaan ku sameeyay. Aad u fiican! Aad baad u mahadsantahay 😀
Haha halkan annaga oo jecel anime ayaa yar.
Ilmo raaxo leh.
Anigu waxaan ahay nin avatar-kayguna waa dabeecad anime: suiseiseki. Wax dhib ah kuma qabo isticmaalka muuqaalka dabeecadda dumarka 😉
Sidoo kale avatar-kaaga wuxuu ka yimaadaa warankii anime, in kasta oo uusan waligiis arag cutub, magiciisa ayaa ka horreeya.
Runtii, waxaad kamid ahayd akhristayaashaas aan tixraacayay.
Waxaan sidaa u leeyahay sababtoo ah u janjeerida qof gaar ah ee ku jira baloogga oo ugu yeeraya midka gashanaya avatars dumar fag.
Nasiib wanaag isagu kuma jiro Mierdofu $ taas haddii kale ...
Waxay umuuqataa mid xiiso leh, waxaan isku dayi doonaa inaan arko sida ay u shaqeyso. In kasta oo aan u maleynayo, Geesinimo, in cinwaanka uusan ku ekaanin "Gabdhaha." Si kadis ah ayaan ugu yaraaday goobta xiisaha ragga xiisaha yar. Cidii dooneysa inay adeegsato, ha adeegsado, xaaladdiisa galmada ha ku xirnaato 😀
Waxaan cinwaanka u beddelayaa mid kale
Kama qaniinin mowduuca avatar maxaa yeelay runtu waa xoogaa isku mid laakiin marka la arko sawirka haddii xD, Simone Simmons maya? Epica halkan ayey joogtay dhowaan waxaan jeclahay haweeneydan sida codkeeda oo kale
Runtii, Simone Simmons.
Isku soo wada duuboo symphonic-kayga maahan laakiin waxaan jeclahay Epica, isku darka codka haweenka ee nadiifka ah iyo qanjirka 'guttural' aad ayaan u jeclahay.
Waan ka xumahay, Geesi
Laakiin waxaan u arkaa qodobkan xoogaa muuqaal ah, waad iga yaabisay, waxay kaa sii dhigtay Texas Walker Ranger xDD
Sideedaba, indhaha quruxda badan ee gabadha muuqaalku ka muuqdo, kama joogsato indhahayga, waxaan u maleynayaa inay i jeceshahay 😀
Nin, laakiin weli ma jecli khaniisiinta, hah?
Marwalba waad sii qasan kartaa, waa inaad seegtay faallooyinka.
Waa aniga oo ah mawduuc xasaasi ah oo aanan dooneynin inay si xun iiga fikiraan, waxaan horeyba ula soo kulmay xanta (ma ahan halkaan) mana jecli.
Waan ogahay waxa Yoyo Fernández uu sameynayo, laakiin mararka qaar qalad ayuu ku helayaa isagoo qoraal ah, in kastoo aan sidoo kale sameynayo wax la mid ah, annagu ma nihin kuwo dhab ah.
Kaftan badan ayaa halkan ka jira sidaad ogtahay.
Waayahay, taasi waa waxa aad tiraahdo, way adagtahay in laqabto codka marka aad wax qoraysid, iyo inbadan hadii aadan aqoon qofka 😉
Waa hagaag waxba, waxaan dareemayaa jahwareerka.
Ma jiro nin, si fiican.
Tani waxay ahayd kaftan, dabcan waxay ahayd, laakiin mararka qaarkood qoraalada kale mawduuca durba si dhab ah ayuu ula yimid ka dibna waxaan sameeyay faallo isku mid ah.
Taasi waa waxa aan ula jeeday
Wax ku biiris aad u wanaagsan, waxaan jeclahay sawirka fanaanad caan ah, ma dhageysan heesaheeda mudo dheer
Ku jawaab azavenom
Ku jawaab antonella
dayana aylem dijo
Ku jawaab dayana aylem
Ma doonayo inaan sameeyo
Kaftan: Elav VS KZKG ^ Gaara
Kubuntu KDM aad ufiican oo u dhigma KSplash